LibreOffice 4.0.0 RC1 waxaa ka mid noqon kara taageerada shaqsiyaadka | Laga soo bilaabo Linux
LibreOffice 4.0.0 RC1 waxaa ku jiri kara taageerada qofka
Sideen u taageeraa Dadka? Waad saxantahay, Dadka, nidaamka ay hirgeliyeen Mozilla Firefox in la beddelo maqaarka biraawsarka oo la siiyo taabasho shaqsiyeed.
Waxqabadkan waxaa lagu hawl gelin karaa markii ugu horreysay gudaha LibreOffice 4.0, kaliya helitaanka LibreOffice »Qalabka» Shakhsiyeynta »Dooro Shakhsi oo waxaan arki lahayn wax la mid ah tan:
Warku wuxuu ka yimaadaa gacanta Michael Meeks horumariyaha ah LibreOffice waxaadna ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan gudaha xidhiidhkan.
Gaar ahaan, in kasta oo fikraddu aysan xumeyn, laakiin waxaan u maleynayaa in tani aysan ahayn isbeddelka muuqaalka ah ee ay adeegsadayaasha ku shaqeynayaan xafiiskan Office Suite ay sugayaan. Sikastaba, waa talaabo horay looqaaday, waan arki doonaa sida ay arimuhu usocdaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » LibreOffice 4.0.0 RC1 waxaa ku jiri kara taageerada qofka
44 faallooyin, ka tag taada
Ma xuma, laakiin waxaan doorbidaa isbeddel kale oo muuqaal ah, sida ku xusan maqaalka.
Waxaan isticmaalaa LOv 4.0.0 RC2 .. Sideen ku hubiyaa inaan rakibi karo "Dadka"
Haddii ay shaqeyso 😀
Maqaalka wuxuu ku leeyahay sidaas .. ¬¬
Already Hore ayaan u gartay .. xD
xDD Hada waa inaan cusbooneysiiyaa cinwaanka boostada .. Mar dambe lama awoodo, laakiin waxaa ku jira.
Hagaag .. Waan helayaa ikhtiyaarka laakiin halkaas ayaan uga socdaa mawduuca oo isbadalay .. waddo dheer ayaa jirta. Miyay noqon doontaa KDE? xD
Runtii waan jeclahay sida sawirka hore u muuqdo, waxay i xasuusisay Mozilla, laakiin inaan aaminsanahay in waxa adeegsadayaashu ay jeclaan lahaayeen ugu badnaan ay beddeleyso muuqaalka astaanta.
Kaliya maahan astaamaha, laakiin interface-ka oo dhameystiran, dabcan, ma ahan sida Calligra, maxaa yeelay si kasta oo aan isugu dayo, uma baran inaan adeegsado.
Calligra waa mid aad u fiican, laakiin sidoo kale ma aanan awoodin inaan sifiican ula qabsado, sidaas darteed waxaan dib ugu noqday libreoffice. Waxa kale oo ay leedahay iswaafajin la 'odt ku abuuray laptop-ka oo leh libreoffice iyo kuwa lagu abuuray miiskeyga ee loo yaqaan' calligra ...
Calligra waa run kharash badan ayaa ku baxa la qabsiga marka la barbardhigo liibreoffce waa mid aad u aasaasi ah, laakiin wali aad ayey u wanaagsan tahay oo Libreoffice waxay ku socotaa horumar ballaaran.
Ma dhahayo maya. Xaqiiqdii waan isticmaalaa Calligra waqti ka waqti, laakiin anigu la qabsan maayo oo fiiriyo, waan isku dayay ...
Waa suurtagal in la beddelo dulucda astaamaha, runtiina waxaa jira kuwo aad u wanaagsan, ma xasuusto sida loogu sameeyo daaqadaha, waxay noqon lahayd arrin naftaada lagu diiwaangelinayo
Ku jawaab irving
Waa run in wajiga weyn loo baahan yahay, laakiin waan jeclahay fikradda ^^
Taageerada dadka waxaan u maleynayay inay tahay taakuleynta naafada. Maxaa kaftan ah.
Ma ahan inay waqti ku lumiyaan dibin daabyo sidan oo kale ah.
Maxaa ku dhacay websaydhka ay ka hadlayeen, midka ku soo bixi lahaa nooca soo socda ma garanayo inta nooc ee ka horreeyay?
Waxay u muuqatay mid wanaagsan.
Maaha websaydh, waa mashruuc la mid ah Google Docs, kaalay, qolalka xafiis ee daruurta.
Waxay sidoo kale sheegeen inay u wareejinayaan Android iyo iOS, laakiin waxyaalahan waqti ayey qaadanayaan.
Waxaan u maleynayay inay noqoneyso web interface iyo in lagu rakibo server kasta.
Sikastaba, waxay umuuqataa inay soconeyso waqti dheer.
Dhinaca kale, dad badan ayaa weydiisanaya in la beddelo muuqaalka dalabka, aniga shaqsi ahaan waan jeclahay sida ay tahay waxaanan doorbidi lahaa in lagu daro hagaajinta ku jirta halkii laga beddeli lahaa muuqaalka oo hubaal ahaan dhib badan leh.
Xusuusnow wixii ku dhacay Blender, markii ugu horreysay isticmaaleyaashu si buuxda ayey ugu lumeen isdhexgalka cusub waxayna ahayd "ku dhowaad" sida barashada inay la tacaalaan barnaamijka mar labaad laakiin nasiib wanaag waxay u fiicneyd.
Waxaan kaliya rajaynayaa in LibreOffice aysan kufirin nuqul ka sameynta sheyga microsoft, diiwaanka aniga taageere uma ahi laakiin taas waxaan jeclahay inay ku sii sugnaato sida ay tahay, kaliya waan waydiisanayaa taas.
Dadaalka ay sameeyeen horumariyayaashu waa la bogaadiyey; Laakiin haddii aan ka hadalno isbeddel ku yimaada heerka is-dhexgalka, waxaan u maleynayaa in wajiga si xun loo baahday, si loo sii casriyeeyo is-dhexgalka.
Dhinaca kale, waxaan u maleynayaa inay diiradda saarayaan dadaallada heerka waxqabadka.
Pffu waa inay kaliya sameystaan ​​isdhexgal kale ..., runti waxay u egtahay mid fool xun sida, ma dhahayo inay koobiyeen ms office, laakiin ugu yaraan wax la mid ah osx suite, fudeyd iyo malaha wax cusub, la hadal nashqadeeyayaasha oo dhagayso iyaga mar.
Sida dadka kale, waxaan u maleynayaa in tani aysan ku filneyn. LibreOffice waxay si deg deg ah ugu baahantahay isbadal dhanka isdhaafsiga ah.
Waxaa la hadal hayaa in Apache ay qorsheynayaan inay isbadal ku sameeyaan OpenOffice 4.0. Waxay umuuqataa inay lamid noqon doonto Lotus Symphony.
Wax sidan oo kale ah ama wax la mid ah:
Waxaan u maleynayaa inay qalad naqshad tahay in la dhigo goobo siman, ku arag shaashadda «font» tusaale ahaan, shaashadda toosan, xitaa waxay iga dhigeysaa inaan doonayo inaan majaajilleeyo libreoffice oo leh naqshad cusub, dhanka kalena waan oggolaan karaa Tihanum wuxuu abuuraa waxa loogu yeero kan abuuray astaamaha quruxda badan ee faenza wuxuu abuuraa astaamaha libreoffice 4.0 maxay yiraahdaan?
Ilaahayow! Way ka sii foolxun tahay bilowgii xd
Hmmm, anigu kama walwalayo taas. Waxaan u maleynayaa in waxa ugu weyn ay noqon doonto in la hagaajiyo iswaafajinta 100% ee udhaxeysa noocyada mustaqbalka ee Microsoft Office, si loogu candhuufo wajiga kuwa bahallada ah ee ku adkeeya nooc kasta oo cusub. Sidoo kale, ku dar wax qabadyada sida abuuraya jaantus ama qalab cusub sida macros. Waxaan u maleynayaa in tani ay ka badan tahay inta ku filan. Farxad…
Sideen ku heli karaa keyd aan ku isticmaalo beta?
Ma doonayo isbeddel weji ah oo ku saabsan qaabka is-dhexgalka. Sida ay hadda tahay wax soo saar badan. Kuma dhahayo waa inaad joojisaa hal-abuurnimada ama wax la mid ah, laakiin waxaan u maleynayaa in sawirka LibreOffice la gelinayo ay umuuqato mid aad u wanaagsan hadana waa ku filan tahay.
si fiican ayaa loo yidhi
Waxaan mararka qaar u maleynayaa in illaa iyo inta ay shaqeyneyso, inta soo hartay aysan wax micno ah lahayn, laakiin waa in la aqoonsado in sawirka "uu iibiyo", yaa dhexdiinna ka mid ah markii aad haweeney raadinayso oo uusan dan ka lahayn haddii ay quruxsan tahay iyo inay fool xun tahay? iyo saxan cunto nafaqo leh oo cusub laakiin aad u liidata la soo bandhigay? Waxaan u maleynayaa in mararka qaar degitaanka shaqeynta iyo hadda, adigoon sharraxaad ka saarin ay tahay dhexdhexaad, miyaadan u malayn? Marka waxaan u maleynayaa in isdhexgalka uu muhiim yahay, sidaa darteed dadka isticmaala cusubi badiyaa waxay u aqbalaan sheyga si fudud.
Waxa dhacaya ayaa ah in LibreOffice aysan ahayn "wax soo saar" sida M $ Office, waa qolal xafiis oo bilaash ah oo ay hayaan oo ay horumariyeen aasaas aan faa'iido doon ahayn, marka uma baahnid inaad wax iibiso, ama xaalad kasta ha noqotee, sida magaceedu tilmaamayo , waxaad siisaa xorriyad. Waxaan sidoo kale aaminsanahay, maadaama ay xaqiiqdii yareyneyso ilaha dhaqaale, waa inay diirada saaraan howlgalka iyo abuurista astaamo cusub, iskuxirku ma xuma, waa wax la istcimaali karo, waqtigii Xafiiska 1997 cidna caban ma jirin.
malaa'ig miguel dijo
... Waxaan u maleynayaa in runtii iswaafajinta iyo xasiloonida qaababka feylku ay aad muhiim u tahay, laakiin waxaan u maleynayaa in isdhexgalka adeegsadaha wali lagu sameyn karo qaab sidaas u raalli ku ah isha, iyada oo aan lagu xadgudbin.
Ku jawaab b1tblu3
Waxaan u maleynayaa in kaliya codsashada miisaanka midabbada caadada ah ay ku filnaan laheyd in diirada la saaro hagaajinta qaabka dukumiintiyadaada, lagana yaabo in lagu daro mowduuc astaan ​​cusub.
Waan kuugu raacsanahay.
Runtii dan kama lihi isku xirnaanta maxaa yeelay waxaan u arkaa inay aad u wanaagsan tahay. Ma jecli inay bilaabaan inay isbedel ku sameeyaan sida MS-da xafiiskoodii ugu dambeeyay, kaas oo aan gebi ahaanba naftayda ku lumiyo xitaa daabacaadda ama sameynta Hordhaca waxa aan samaynayo waxay qaadataa waqti ka badan sidii ay ku samayn jirtay noocyadii hore (kiiskeyga, Waqtiga ay igu qaadato inaan wax sameeyo waa waxa qeexaya wax soo saarkeyga), oo ikhtiyaar ugu lahaa baarka sare, aadna loo heli karo. Waxaan u maleynayaa in LO ay aad u wanaagsan tahay sida ay hadda tahay iyo in waxa ay tahay inay wax badan ka shaqeeyaan ay tahay iswaafajinta xafiisyada kale ee Office Suites maxaa yeelay waxaan ku qabtay shaqo LibreOffice, waxaan ku furaa iyaga markii dambe 'Excel' wax walbana waa isku mid marka laga reebo geesaha qaarkood, xariiqyada, xarfaha mararka qaarkood, iwm. Haddii kale waa wax aad u wanaagsan oo ku furmaya nooc kasta oo heer sare ah, ha noqdo duq ama cusub. Sikastaba, way fiicantahay inay sii kordhiyaan waxyaabo cusub.
Ku jawaab Darko
Marka laga eego dhinaca isticmaalka, nabaro aad u tiro badan ayaa iga careysiiya markaan shaqeynayo, isdhexgalka looguma talagalin galinta gidaarka. Waxaan rabaa gtd (wax-ka-qabad) dhakhso !!
Shaqeynta iyo bilicsanaanta la safeeyey. LibreOffice waa laakiin aad uga fiican
ka badan Microsoft Word. Waxa kaliya ee aan u maleynayo inay ka maqan tahay waa hagaajinta qurxinta
ee astaamaha. Laakiin maaha dadka. Waxaan kaliya isticmaalaa Firefox waligayna ma isticmaalin
rakibay Dad. Arrin dhadhamin.
Ma ii sheegi kartaa waxa fiican? Mahadsanid.
Xitaa ma rumeysatid. Mar alla markii aad barato meesha ay wax yaalliin Microsoft Office waa mid dareen u leh sida barnaamij kasta. Oo yaanan ka hadal awoodda, Libreoffice waa xadidan tahay. Markaad tahay isticmaale Libreoffice, waxaan kuu sheegi doonaa markaad la shaqeyneyso feylasha adag, inay fiicantahay. Ku billow inaad sawirro geliso waxaadna arki doontaa halka ay xoogga ku sii taagnaanayo. Waxaan la shaqeeyaa mug weyn oo dokumenti ah iyo shaqo sawirro leh tusaale ahaan 4 megabytes oo aan caadi aheyn, waa wax aan shaqeyn karin
Si kastaba ha noqotee Microsoft Office wuxuu cunaa waxaad ku tuurayso. Libreoffice waa wanaagsan tahay, beel ahaana waa wax weyn, laakiin yeynaan ku fogaan.
Ku jawaab Arkangelovich
Hagaag, ma aqaano waxa aad u malaynayso, in kastoo aan jeclahay fikradda ah in la siiyo taabasho shaqsi ahaaneed oo ku saabsan codsiyada iyo nidaamka hawlgalka, haddii aan jeclaan lahaa in ka sii badan in aasaaska uu siiyay shaqooyin dheeraad ah oo ku saabsan isdhexgalka desktop-ka, iyadoon loo eegayn waxa ; tusaale ahaan KDE, Gnome, XFCE, iwm. la dhexgeliyo labadaba ku saabsan asalka iyo mawduuca caadada ah. Waxaan ka faalloodaa waxa kor ku xusan maxaa yeelay meelaha kale iyo tan, tixraac ayaa loo sameeyay xaqiiqda ah in isku xirnaanta qolka uu yahay mid aad u qadiim ah oo, in si waadax ah loo sheego, waxay leedahay muuqaal & dareemo software laga soo bilaabo 90-maadkii qarnigii la soo dhaafay .
Sikastaba, waa dhadhan shaqsiyadeed oo cad, ma garanayo waxaad u maleyneyso.
Ma dhahayo LibreOffice waa inuu lahaadaa qaab Ribbon-qaab ah, laakiin kaalay, isbadal ayaa horeyba loogu baahday astaamaha iyo qaabka macluumaadka loogu abaabulayo qashinka ... waa wax shaqsi ah, dabcan .
Iskusoo wada duuboo, waa run, waxaan ubaahanahay isdhexgal badan, iswaafajin badan iwm
Waxaan lahadlayey Michael Meeks oo ka socda LibreOffice (libreoffice [at] lists.freedesktop.org) ………. Waxaan weydiiyay hadii ay leeyihiin API maktabadaha VCL ee LibreOffice ay adeegsato ……. Waxay iigu jawaabeen maya…. Kaliya waxay hayaan macluumaad uun… aniga ayey isiisay tan …… .. https://wiki.documentfoundation.org/Development/WidgetLayout …… .. xiriiriyehani wuxuu muujinayaa sida maktabadaha VCL loo sameeyo oo ay u shaqeeyaan…. http://docs.libreoffice.org/vcl/html/classes.html ..........
Isku xirnaanta oo dhan waxay ku saleysan tahay maktabadaha …… .. Isku soo wada duuboo, waxa ugu xun ayaa ah in aaladdan widget-yada ah aysan ka jirin Gtk 3.6 ama Qt 4.9 …………
iyo maktabadahaan looma habeynin inay la shaqeeyaan Gtk3 iyo Qt 4.9 GT. GTk3 iyo Qt 4.9 ma lahan shaqooyinka ay LibreOffice ku isticmaasho interface-ka ……………
Dhammaan maktabadaha VCL waa in dib loo qoraa si ay ula jaan qaadaan Gtk 3.6 ama Qt 4.9, waa hawl aad u weyn …………… Laakiin PYTHON, RUBY, WxWidgets, VALA, iwm horumariyayaashu waxay maktabadooda ka dhigaysaa inay la jaan qaadi karto Gtk 3.6 ama Qt 4.9 waa shaqo weyn laakiin way qabtaan.
Waa hawl aad u weyn in la waafajiyo VCL Gtk 3.6 ama Qt 4.9 b .laakiin waxaan qabaa inay u qalanto.
Haddii aad hesho casharro tusaalooyin fudud leh oo leh VCL gudbiya macluumaadka, waan u baahanahay ………
Waxaan la socdaa Charles Schulz oo ka socda LibreOffice… oo jooga GOOGLE +… https://plus.google.com/u/0/communities/105920160642200595669
la xiriiri kartaa horumariyeyaasha 'LibreOffice'
Michael Meeks iyo Bjoern Michaelsen ayaa hogaaminaya isbeddelada koodhka ee mashruuca LibreOffice.
Ku jawaab Mariano Gaudix
mmm Waxaan u maleynayaa inay tahay isku daygii ugu horreeyay ee isbeddelada soo socda ee is-dhexgalka, tan waxaan u maleynayaa inay dhigi doonaan mowduucyo habeyn wanaagsan oo ka sii wanaagsan sidii ay ugu dhacday Firefox, halkan laga bilaabo in barnaamijyayaashu ay sidoo kale abuuri karaan mowduucyo iyaga u gaar ah oo ay wadaagi karaan, laga yaabee xitaa qaababka isdhexgalka ee kala duwan, Salaan.
Ku jawaab Dracko
xariiqa wanaagsan si aad u awoodo inaad bedesho astaamaha
Sida loo isticmaalo a Raspberry pi sida xarun warbaahineed
Sida loo rakibo Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal talaabo talaabo ah